» यो हप्ता जोगिएलान् अमिन र समिक्षा ?
यो हप्ता जोगिएलान् अमिन र समिक्षा ?
१८ पुष २०७७, शनिबार १८:३४
मकवानपुर, १८ पुस । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल स्टार’ मा यो साता उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु छानिँदैछन् । यसअघि नै उत्कृष्ट ७ को छनौटका क्रममा बाहिरिएका चर्चित प्रतियोगी विशालदेव श्रेष्ठसँगै शोका अर्का दुई चर्चित प्रतियोगीहरु अमिन परियार र समिक्षा दाहाल बटम थ्रीमा परेका थिए । बटम थ्रीमा परेसँगै यी प्रतियोगीहरु यो साता उत्कृष्ट ६ मा पर्लान् वा नपर्लान् भन्नेमा दर्शकहरुबिच चर्चा चलेको छ । अमिन नेपाल स्टारको स्टेजमा नेपाली माईकल ज्याक्सनका नामले परिचित छन् भने समिक्षा रकस्टारका रुपमा चर्चित छन् । यी दुबै प्रतियोगीहरु जुनसुकै गीतहरु गाउनमा माहिर छन् । उत्कृष्ट ६ का लागि उत्तिकै हकदारका रुपमा देखिएका यी दुई प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगी उत्कृष्ट ६ मा पर्लान् वा दुबै जना उत्कृष्ट ६ मा पर्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो–
नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल छैटौँ प्रतियोगी हुन् अमिन परियार । उत्कृष्ट ७ को छनौटका क्रम अमिनले निर्णायक आलोक श्रीबाट स्टाण्डिङ अवेशन पाएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले बेजोडको प्रस्तुति भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । नेपाल स्टारको स्टेजमा नेपाली माईकल ज्याक्सन भनेर चिनिएका अमिनले विभिन्न राउण्डहरुमा निर्णायकहरुको प्रशंसा र ताली पाउँदै आएका छन् । पोखरा अडिसनबाट छानिएका अमिनले फरक फरक प्रस्तुतिहरु दिएर निर्णायकहरुको मन जितेका छन् । पोखरा निवासी १९ वर्षीय अमिन संगीत क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडि बढेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ७ मा पुगेकी सातौँ प्रतियोगी हुन् समिक्षा दाहाल । उत्कृष्ट ७ छनौटका क्रममा निर्णायक आलोक श्री र रामकृष्ण ढकालले उनलाई स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । उनलाई निर्णायक आलोक श्रीले संगीतको एकमात्र कम्प्लीट प्याकेज भनेका छन् । रक जेनरका साथै आधुनिक शैलीको गीत पनि निक्कै राम्रो गाएको भन्दै उनले समिक्षाको प्रशंसा गरेका थिए । निर्णायक रामकृष्ण ढकालले नेपाल स्टार बन्नसक्ने क्यान्डिडेट भएको समेत भनेका छन् । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएकी समिक्षा ईलामको सुर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित फिक्कल गैरीगाउँ निवासी हुन । समिक्षा बिगत एक वर्षदेखि संगीत सिक्दैछिन् । सानैदेखि गाउन सुरु गरेकी समिक्षाले काठमाडौँमा आएर पनि गायनमा संघर्ष गरेकी छिन् । उनी नेपाल आईडल सिजन २ को थिएटर राउण्डसम्म पुगेकी थिईन् । केही कभर तथा ओरिजिनल गीतहरु समेत गाएकी समिक्षाले निर्णायकहरुको मन जितेकी छिन् । उनी नेपाल स्टारमा रक स्टारका रुपमा चिनिदै आएकी छिन् । उनी २३ वर्षकी छिन् । नेपाल कमर्स क्याम्पस (एनसीसी) बाट स्नातक गरेकी समिक्षाले फिक्कलकै पञ्चकन्या बोर्डिङ स्कूलबाट अध्ययन सुरु गरेकी थिईन् । उनले फिक्कल माविबाट प्लस टु सकाएकी हुन् । सुरुमा नाच्न धेरै रुचाउने समिक्षाले अध्ययनका लागि काठमाडौँमा आएपछि गायनमा रुचि देखाएकी हुन् । सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित उनका काका भूगोल दाहाललाई उनले पहिलो गुरु मान्छिन् । बुवा मातृका दाहाल र आमा चण्डिका दाहालको कोखबाट जेठी छोरीको रुपमा समिक्षाको जन्म भएको हो ।